June, 2019 | Job Vacancy in Myanmar
2019-06-24 18:52:32 , Plz admin မင်္ဂလာပါရှင့် လုပ်ငန…
Plz admin မင်္ဂလာပါရှင့်??
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း English စာကို professional ကျကျပြောနိုင်ဆိုနိုင်ဖို့ English စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး email,gmailကို ကျွမ်းကျင်စွာ professional ကျကျရေးနိုင်ဖို့ တက်ကိုတက်သင့်တဲ့ဘာသာရပ်လေးပါနော် ပညာပါရမီမှာ july6ရက်နေ့စတင်သင်ကြားပို့ချသွားမှာပါနော်
July လ4 ရက်နေ့မတိုင်ခင်လာရောက်အပ်နှံပေးပါက 10%discount လေးလည်းရှိပါတယ်???
This entry was posted in Training and Class on 2019-06-24 by admin.
2019-06-24 18:37:48 , Plz admin Certificate In Japa…
Certificate In Japanese Language (N5)
• ယှဉ်ပြိုင်မှုတွေ များနေတဲ့? လောကကြီးထဲမှာ English Language တစ်မျိုးထဲ ပြောတတ်ရုံနဲ့လုံလောက်ပြီလို့ ထင်ပါသလား…?
• လုပ်ငန်းခွင်မှာ သူတစ်ပါးထက် နှာတစ်ဖျားသာချင်ရင်တော့?? ကိုယ့်ဘက်ကလဲ လိုအပ်တာတွေ ပြင်ဆင်ထားမှ ဖြစ်မှာပါ…?? လိုအပ်နေတာတွေထဲက တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့ Language ပိုင်းကို မြှင့်တင်ဖို့ Japanese language ကို ပညာပါရမီ(တာမွေ) မှာ လာတက်လိုက်ပါခင်ဗျ??
July လ 4ရက်နေ့ထိ 10% discountပေးထားပါတယ်နော်
လူဦးရေကန့်သတ်ထားလို့မြန်မြန်လေး Register လုပ်ထားမှစိတ်ချရမှာပါနော်??
2019-06-24 16:13:11 , Please Admin တင်ခွင့်ပြုပါရှင်…
Please Admin တင်ခွင့်ပြုပါရှင့်??
▶ Professional HR manager ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့မသိမဖြစ် သိသင့်တာတွေ မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ရမယ့် functionတိ်ုင်းကိုသိရဖို့အတွက် ဈေးနှုန်းအသက်သာဆုံးနဲ့ပညာပါရမီမှာInternational Certificate in Human Resource သင်တန်းကိုအပ်ကြပါစို့….
July လ5ရက်နေ့မတိုင်ခင်လာရောက်အပ်နှံပေးပါကစာအုပ်စာတန်းကြေးအပါအဝင် 29000ks ကို
10% discount ထပ်ပေးမယ့်အခွင့်အရေးအပြင်
Singapore CEDRA ACADEMY ကတိုက်ရိုက်ချီးမြင့်မယ့် 
Certificate In Business Administration ကို ခမ်းခမ်းနားနား ပေးအပ်သွားမယ့် အခွင့်ရေးလည်းရှိတယ်နော် ??
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ☎09797530707 သို့လည်းဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်..??
2019-06-19 09:32:36 , Plz admin လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ဖို့…
Plz admin ?? လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ဖို့ အခက်တွေ့နေတဲ့သူတွေ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေလုပ်မယ့်သူတွေ ကိုယ်ကိုတိုင် Management ပိုင်းကို ဦးဆောင်ကွပ်ကဲနိုင်ဖို့တက်သင့်ပါတယ်နော်??ဝါသနာနဲ့ရွေးချယ်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ထပ်တည်းကျပြီး ရည်မှန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်နေသူ ————————————————— လူငယ်တွေအတွက် ကိုယ်ရည်မှန်းထားတဲ့ ပန်းတိုင်ကို အရောက်လှမ်းနိုင်ဖို့ က အရေးကြီးပါတယ်။
ကိုယ်ဝါသနာပါရာလမ်းကြောင်းကို ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပြီး အနာဂတ်ကို… More
This entry was posted in Training and Class on 2019-06-19 by admin.
2019-06-10 18:22:31 , Plz admin မင်္ဂလာပါရှင့် Certi…
Project Management ပညာရပ်ကို လေ့လာသင်ယူပြီး မိမိ၏အလုပ်တွင် ရာထူးနှင့်လစာတိုးတက်ရန်အတွက် အလွန့်အလွန်အထောက်အကူပြုရန် တက်ရောက်သင့်ပါတယ်နော်.. Project Management အကြောင်းကိုအခြေခံမှစပြီးလေ့လာသင်ကြားလိုသူများအတွက်ပညာပါရမီမှာယခုဖွင့်လှစ်တော့မယ့်international certificate in Project Management သင်တန်းကို လာပြီးတက်ရောက်သင်ကြားဖို့ အကြံပြုလိုက်ပါရစေရှင့်??
ပထမအသုတ်က လူပြည့်သွားလို့မတက်လိုက်ရတဲ့သူတွေ #Discount လေးလည်းရှိ လို့ ခုအခွင့်ရေးလေးကိုလက်မလွတ်လိုက်နဲ့နော် ???
လူပြည့်မြန်လို့မြန်မြန်လေး Bookingလုပ်ထားမှ စိတ်ချရမှာပါနော်
This entry was posted in Training and Class on 2019-06-10 by admin.